Efa ela isika no niady ho amin’izany ary sesilany mihitsy ny hetsika isan-karazany nentina nitakiana io fahalalahana io, indrindra fa tato anatin’ny taona vitsy izay. Tsy arakaraka ny zavatra notakiana no setriny fa toa vao mainka aza nivaralila, ka nihemotra hatrany ny laharantsika izay faha-57 amin'ny firenena 180 amin’izao fotoana izao. Tsy atao mahagaga satria ny olona nilaza azy ho mpitolona sy mpitaky ny fahalalahana aza lasa mpangeja sy tsy manome hirika ho an’ny hafa rehefa nomena toerana ao anaty fitondrana, hany ka lasa fitaovana hisakanana ny anjara masoandron’ny hafa noho ny tsy fitovian-kevitra politika. Firifiry ny haino aman-jery tsy mitovy firehan-kevitra amin’ny mpitondra no tsy havela hisokatra ? Firifiry ihany koa ireo mpanohana no manao izay danin’ny kibony ? Manginy fotsiny ny terisetra sy ny fibodoana ny mari-drefy sy ny fananan’ny haino aman-jery tsy mitovy firehana amin’ny mpitondra. Mbola resaka ambony latabatra aloha hatreto izany fahalalahana izany, fa izay tena finiavana hampanjaka azy dia tsy misy. Aleo mba tena halalaka amin’izay fa tsy atao balarora fotsiny, ka havela hisokatra izay nakatona sy nodorana ary haverina ireo nangalarina e ! Aoka izay ny adin’ny kanosa raha tena fahalalahana marina no tadiavina.